အင်္ဂလန် မှာအသစ်တွေ့ ရှိ ခဲ့တဲ့ မျိုးရိုး ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ် ပိုး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့် သော အချက်(၄)ချက် – Real Link
အင်္ဂလန် မှာအသစ်တွေ့ ရှိ ခဲ့တဲ့ မျိုးရိုး ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ် ပိုး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့် သော အချက်(၄)ချက်
By Real DPosted on December 17, 2020
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ က အင်္ဂလန်မှာ ကိုဗစ်ပိုး မျိုးဗီဇ အသစ်တွေ့ ရှိကြောင်း ကြေငြာခဲ့ တယ်။ အဲဒီအသစ်တွေ့ရှိတဲ့ ပိုးဟာ အလွန် ကူးစက် မြန်တယ် တဲ့၊ အင်္ဂလန် တောင်ပိုင်းမှာတွေ့ တာ။ သူတို့ဆီမှာတော့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနေပြီဆို တော့ မြန်မြန်ထိုးကြ ပေါ့။ အင်္ဂလန်လို တခြားနိုင်ငံ မှာသွားပြီး မပြန့်နှံ့ဖို့ လိုပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ အသစ်တွေ့ရှိရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပုံ က လည်း ပြောင်းလဲသွားပါ တယ်။ လက်ရှိမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး က ဇူလိုင်လ မှာတင် အကြိမ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ မက ပြောင်းသွားခဲ့ တယ် တဲ့။ ကံကောင်းတာ က မျိုးဗီဇအသစ် တချို့က လည်း လူတွေ ကို မကူးစက်နိုင် လို့ မျိုးတုံးသွား တဲ့ အထဲ ပါသွားတာ တွေလည်းရှိ တယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်း ရပ်စ် ရဲ့ ထူး ခြား ချက် ကတော့ အမျိုး တခုထဲက နေ ခဏခဏ ပြောင်းတာအ လွန်ထူးခြား ပါတယ်တဲ့။
(၁) အခုပေါ်နေ တဲ့ ကာကွယ်ဆေး အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် ကို ဆက်လက် လေ့လာဆဲ။ ပညာရှင်တွေကတော့ စိတ်မပူဖို့၊ ကာကွယ်ဆေးက မျိုးရိုးပြောင်းလည်း မျိုးရိုးအ သစ် နဲ့ အညီ လက်ရှိ ကာကွယ်ဆေး ကို ပုံပြောင်းထုတ် ဖို့ လွယ်ပါတယ် လို့ အားပေးပါတယ်။
(၂) ပိုပြီးတော့ အသေအပျောက် များမလားလည်း လေ့လာနေဆဲ ။ ကူးစက်မှုနှုန်း ကတော့ အတော့်ကို မြန်တယ်ပြောတယ်။ မျိုးရိုးတူ ပုံစံ ကွဲ ဗိုင်းရပ်စ် ကများလွန်း လို့ ဘယ်အမျိုးက ပိုအန္တရာယ်များတယ် လေ့လာဆဲပါ တဲ့။
(၃) ဘယ် အမျိုးသစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Mask တပ်တာ၊ လူအုပ်စုတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေတာက အလုပ်ဖြစ်နေ ဆဲပါတဲ့။
(၄) ကူးစက်မှုနှုန်း မြန်ခြင်းကြောင့် ယခုလက်ရှိပိုးထက် လူ့အသက် အန္တရာယ် ပိုရှိလားမရှိဘူးလား ဆိုတာကလည်း အချိန်တစ်လလောက် လေ့လာကြည့်ရဦးမှာ ပါတဲ့။ ဥပမာ အပြေးမြန်တဲ့ လူက လူသတ်သမားဖြစ်ချင်မှ လည်း ဖြစ်မှာပေါ့။
ပြောပြချင်တာ က တော့ အင်္ဂလန်မှာက ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ ပေါ လို့ ချက်ခြင်းသိတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲ က ဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်နှစ်မျိုးရှိ နေ လဲ? ဥပမာ လူက နေ လမ်းဘေးခွေးကူး၊ ခွေးကနေ လူပြန်ကူး လူက နေ ကြောင် ကို ကူး၊ ကြောင်ကနေ လူပြန်ကူး၊ လူကနေ ခို ကိုကူးနဲ့ ပုံပြောင်းသွား တာ ရှိလားမရှိဘူး လား ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ ပိုးကူးစက်ခံ မြန်မာတစ်ယောက် အင်္ဂလန် အမေရိကန် ရောက်မှပဲ သေချာသိမှာပါပဲ။
ထို့ကြောင့် ကိုဗစ် ပိုး ကိုယ့်ဆီ မကူးစက်နိုင်အောင် နေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ် မျိုးရိုးဗီဇအသစ် ဖြစ်ဖြစ် Mask တပ်ရင် အလုပ်ဖြစ်တာကတော့ သေချာတယ်။ နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ပါ၊ မျက်နှာကာ (face shield) တပ်ပါ၊ လက်ဆေးပါ။
source:Kyaw Swa Min
အဂၤလန္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ က ကိုဗစ္ ပိုးမ်ိဳး ဗီဇ အသစ္ေတြ႕ ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ တယ္။ အဲဒီအသစ္ေတြ႕ရွိတဲ့ ပိုးဟာ အလြန္ ကူးစက္ ျမန္တယ္ တဲ့၊ အဂၤလန္ ေတာင္ပိုင္းမွာေတြ႕ တာ။ သူတို႔ဆီမွာေတာ့ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေနၿပီဆို ေတာ့ ျမန္ျမန္ထိုးၾက ေပါ့။ အဂၤလန္လို တျခားနိုင္ငံ မွာသြားၿပီး မျပန႔္ႏွံ့ဖို႔ လိုပါတယ္။
မ်ိဳးရိုးဗီဇ အသစ္ေတြ႕ရွိရင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပုံ က လည္း ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး က ဇူလိုင္လ မွာတင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ မက ေျပာင္းသြားခဲ့ တယ္ တဲ့။ ကံေကာင္းတာ က မ်ိဳးဗီဇအသစ္ တခ်ိဳ႕က လည္း လူေတြ ကို မကူးစက္နိုင္လို႔ မ်ိဳးတုံးသြားတဲ့ အထဲ ပါသြားတာ ေတြလည္းရွိ တယ္။ ကိုရိုနာ ဗိုင္း ရပ္စ္ ရဲ့ ထူး ျခား ခ်က္ ကေတာ့ အမ်ိဳး တခုထဲက ေန ခဏခဏ ေျပာင္းတာအလြန္ထူးျခား ပါတယ္တဲ့။
(၁) အခုေပၚေန တဲ့ ကာကြယ္ေဆး အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ ကို ဆက္လက္ ေလ့လာဆဲ။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ စိတ္မပူဖို႔၊ ကာကြယ္ေဆးက မ်ိဳးရိုးေျပာင္းလည္း မ်ိဳးရိုးအ သစ္ နဲ႔ အညီ လက္ရွိ ကာကြယ္ေဆး ကို ပုံေျပာင္းထုတ္ ဖို႔ လြယ္ပါတယ္ လို႔ အားေပးပါတယ္။
(၂) ပိုၿပီးေတာ့ အေသအေပ်ာက္ မ်ားမလားလည္း ေလ့လာေနဆဲ ။ ကူးစက္မႈႏႈန္း ကေတာ့ အေတာ့္ကို ျမန္တယ္ေျပာတယ္။ မ်ိဳးရိုးတူ ပုံစံ ကြဲ ဗိုင္းရပ္စ္ ကမ်ားလြန္း လို႔ ဘယ္အမ်ိဳးက ပိုအႏၲရာယ္မ်ားတယ္ ေလ့လာဆဲပါ တဲ့။
(၃) ဘယ္ အမ်ိဳးသစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Mask တပ္တာ၊ လူအုပ္စုေတြနဲ႔ ေဝးေဝးေနတာက အလုပ္ျဖစ္ေန ဆဲပါတဲ့။
(၄) ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမန္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိပိုးထက္ လူ႔အသက္ အႏၲရာယ္ ပိုရွိလားမရွိဘူးလား ဆိုတာကလည္း အခ်ိန္တစ္လေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ရဦးမွာ ပါတဲ့။ ဥပမာ အေျပးျမန္တဲ့ လူက လူသတ္သမားျဖစ္ခ်င္မွ လည္း ျဖစ္မွာေပါ့။
ေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ အဂၤလန္ကေတာ့ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြေပါ လို႔ ခ်က္ျခင္းသိတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲ က ဗိုင္းရပ္စ္ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိ ေန လဲ? ဥပမာ လူက ေန လမ္းေဘးေခြးကူး၊ ေခြးကေန လူျပန္ကူး လူက ေန ေၾကာင္ ကို ကူး၊ ေၾကာင္ကေန လူျပန္ကူး၊ လူကေန ခို ကိုကူးနဲ႔ ပုံေျပာင္းသြား တာ ရွိလားမရွိဘူး လား ဘယ္သူမွ မေျပာနိုင္ဘူး။ ဘယ္သူမွ မသိနိုင္ဘူး။ ပိုးကူးစက္ခံ ျမန္မာတစ္ေယာက္ အဂၤလန္ အေမရိကန္ ေရာက္မွပဲ ေသခ်ာသိမွာပါပဲ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ပိုး ကိုယ့္ဆီ မကူးစက္နိုင္ေအာင္ ေနနိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္မ်ိဳးရိုးဗီဇအသစ္ ျဖစ္ျဖစ္ Mask တပ္ရင္ အလုပ္ျဖစ္တာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ႏွာေခါင္းစည္း (mask) တပ္ပါ၊ မ်က္ႏွာကာ (face shield) တပ္ပါ၊ လက္ေဆးပါ။
Previous post အသားကပ် ဝတ်စုံလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေ ပေါ်လွင်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့ အေးမြတ်သူ
Next post မြင်ရသူ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ဖမ်းစားထားတဲ့ စူစူ ရဲ့ ဗီဒိယို